“ အာနိုးရေ….ဟေ့ အာနိုး…”
နွားစာစင်းနေသော အာနိုးအိမ်ဘေးမှ မပြေးရုံတမယ်လာခဲ့ပြီး….အိမ်ပေါ်သုိ့ လှမ်းတက်လိုက်တော့ မခင်အေးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်။
“ နင့် ဦးလေးလည်း ပိုက်တဲရောက်ရင် ပြန်မလာတော့ဘူး…နင့်ပဲခိုင်းရမှာပ…ညနေစောင်းရင် မိုးရွ့ာရင် ပြန်လာမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး
“ အခုပဲ သွားလိုက်တော့မယ်….အမ….”
အာနိုးက အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာ သံဇကာတွင်ချိတ်ထားသော ခမောက်ကို ဆွဲပြီး ထွက်သွားသည်။ မခင်အေး အိမ်ပေါက်ဝမှရပ်ကြည့်ရင်း ပြုံးမိသည်။ အာနိုင်းက ဖင်ပေါ့သည်။ သိတတ်သည်။ သည်လိုသူရင်းငှားမျိုးရထားတာ သူ့တို့အဖို့ကံကောင်းလှသည်။ ပြီးတော့ အာနိုးက တစ်ကောင်ကြွက် မခင်အေး ၏ယောက်ျား ကိုသန်းငွေ၏ အဖေ မခင်အေး၏ယောက္ခမအိမ်တွပြီး
ငယ်ငယ်ထဲက နေလာကိုသန်းငွေ့ သူတို့ဆီလာပြီး သူရင်းငှားလုပ်နေတာဖြစ်သည်။
နှင့် မခင်အေး အိမ်ထောင်ကျတောအသက်က (၁၅)နှစ်ခန့်သာရှိသေးသော်လည်း အာနိုးဆိုသော နာမည်ရအောင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ထွားကြိုင်းလှသည်။ အခု ကိုသန်းငွေနှင့် မခင်အေးတို့ အိမ်ထောင်ကျပြီး (၂)နှစ်ခန့်အတွ
င်းမှာပင် အာနိုး တော်တော်ထွားလာသည်။ ဒီနှစ်ဆို ထွန်တုံးတောင်နိုင်နေချေပြီ။ မခင်အေးတို့တွင် လယ်ဧက (၂၀)ကျော် ရှိသည်။ လယ်တွေထွန်တုံးပိတ်ကတည်းက မခင်အေး၏ယောက်ျား ကိုသန်းငွေ
က ပိုက်ထဲသုိ့ စတဲချနေ သည်။ ဒီနှစ် ချောင်းရိုးတွ့
င် လိုင်စင်ရသူက ကိုသန်းငွေ၏ သူငယ်ချင်း။ ဒီတောကိုသန်းငွေ တစ်ယောက် အရက်ပေါ၍ ပုစွန်ရွေ့။ အိမ်မှာက သူ့သူရင်းငှား အာနိုးကို
း ငါးရွေး မိန်းမတွေများသည့် ပိုက်ထဲမှ မပြန်တောယုံကြည်စိတ်ချတာလည်းပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်က ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်တာလည်း ပါသည် ပေါ့။
ကိုသန်းငွေက အသက်(၃၀)ခန့်သာရှိသော်လည်း အာနိုးက ငယ်ငယ်ထဲက အတူနေလာသူမို့ နှုတ်ကျိုးပြီး ဦးလေးဟုသာခေါ်သည်။ မခင်အေးကျတော့ အသက်(၂၇)နှစ်တောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် အမ ဟုသာသူကခေါ်လေသည်။ အိမ်မှ ကွင်းထဲသို့ထွက်သွားသော အာနိုးတစ်ယောက် မြင်ကွင်းထဲမှ ပျောက် သွားတော့မှ မခင်အေးက အိမ်ထဲသို့လှမ်းဝင်ရန် ကြံလိုက်ရင်း ကောင်းကင်သို့မော့၍ ကြည့်လိုက်မိသည်။ တောင်ဘက်ဆီမှ မိုးရိပ်တို့က တက်စပြုနေပြီ။ သူမ အာနိုးကိုလွှတ်လိုက်သည်မှာ မှန်သွားသည်ဟုတွေး ရင်း မခင်အေးသည် အိမ်ပေါက်ဝသံဇကာတံခါးကိုပိတ်ကာ အိမ်ထဲသို့ပြန်၍ ဝင်ခဲ့လေသည်။
ပတ်လည်တွင် စားကျက်ကောင်းသဖြင့် ရွာမှကျွဲ
နွားများကို လွှတ်ကြောင်းထားလေ့ရှိသည်။ အခုလည်း အာနိုးတစ်ယောက် ထိုတောတန်းလေးသို့ ရှေ့ရှု၍ လယ်ကွင်းများကိုဖြတ်ကာ လျှောက်လာခဲ့၏။ “ ဟောဟိုရှေ့မှာ….ဒီဖက်ပြန်လာနေကြတာ….အိမ်က ကောင်တွေလားမသိဘူး….” လမ်းခုလတ်အရောက် နွားတစ်စုပြန်လာနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ ဟုတ်တာပေါ့….အိမ်ကကောင်တွေပဲ
…” ထိုအခိုက် မိုးကတဖြောက်ဖြောက်ကျလာသည်။ နွားသိမ်းဖို့တော့ မလိုတော့ဘူး။ မနေ့ကဦးလေး ကိုသန်းငွေပြီးခူးလိုက်အုံးမှပ….ဲ
မှိုစားချင်တယ်ပြောတယ်…။ ကြုံတုန်း သွားအာနိုးတစ်ယောက် ရှေ့တွင်မဝေးတော့သော တောတန်းလေးဆီသုိ့ဆက်၍လာခဲ့သည်။ ထိုအ ခိုက် မိုးကသည်းထန်စွာရွာပြီးတော
ာလာသည်။ အာနိုးတောတန်းလေးသို့ အရောက်လာခ့သည်။့သူမိုးခို နေကျ ညောင်ခေါင်းပေါက်ကြီး ရှိရာသို့ အပြေးအလွှားလာခဲ
့သည်။ မိုးက တမိုးလုံးမဲမှောင်ပြီး သဲသထက် သဲလာသည်။
“ ဟင်…ငါ့ အရင် ဘယ်သူရောက်နေတာလဲ….”
ညောင်ပင်အခေါင်းပေါက်ကြီးရှိရာသို့ လှမ်း၍အမြင်ရတွင် လူတစ်ယောက် ငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေ သည်ကို မိုးထဲလေထဲတွင် မသဲမကွဲ့မြင်လိုက်ရသည်။
တွေ“ ဟင်…..ထွေးထွေး….” “ ဟင်….အာနိုး….” “ နင်….ဘာလာလုပ်တာလဲ….” “ ငါ မှိုလာခူးတာ….မိုးတွေဲ
သဲလာလို့ မပြန်နိုင်တော့တာ….ဒီမှာတကိုယ်လုံးလည်း ရွနေပြီဟာ…. ချမ်းလိုက်တာ ” ထွေးထွေးက မေးရိုက်သံလေးဖြင့် ပြောသည်။ ထွေးထွေးတို့တဲက တောတန်းလေးနှင့် ရွာအကြား ကွင်းထဲ
တွင်ရှိသည်။ တောတန်းလေးမှဆိုလျှင် တခေါ်လောက်သာဝေးသည်။
“ အီး….ဟီး….ချမ်းလိုက်တာ အာနိုးရာ…”
ထွေးထွေး တကိုယ်လုံး ခိုက်ခိုက်တုန်နေသည်။ အာနိုး ထွေးထွေးကို သေချာကြည့်လိုက်သည်။ တကိုယ်လုံးရွဲ
ရွစိုနေ၍ အဝတ်အစားများက တကိုယ်လုံး ကိုယ်တွင် ကပ်နေသည်။ ထွေးထေးမှာ သူမ၏ လုံးလုံးတစ်တစ် ချစ်စရာကိုယ်လုံးလေးမှာ အတိုင်းသားလှပလျက်ရှိသည်။
အာနိုး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ…ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေသည်။
“ နင့် အဝတ်တွေချွ
တ်ပြီး ညှစ် လိုက်ရင်ကောင်းမယ်….” “ ဟာ…..နင်…..နင် ကလဲ…” ထိုအခိုက် လေကလည်း ကြမ်းလာသည်။ “ အာ…နိုး…အမလေး….ဟီး…ဟီး….ချမ်းလိုက်တာ….လုပ်….လုပ်ပါအုံး….” မထူးတော့ပြီ
“ ကဲ….နင် မျက်စိတွေ မှိတ်ထားလိုက်….”
ထွေးထွေးကလည်း ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့….မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ချလိုက်သည်။ အာနိုး ထွေးထွေး၏ အဝတ်အစားတွေကို ချွ
တ်သည်။ အဝတ်တွေရေညှစ်ရင်း အဝတ်အစားတေအားလုံးကျတ် သွားသော ထွေးထွေးကို ကြည့်ကာ အာနိုးတစ်ယောက် စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာသည်။ ထွေးထွေး၏ ထိပ် ကလေးတွေ နီနေသော နို့လေးနှစ်လုံးက လိမ္မော်သီးခပ်ရွပြီးတော့ ထွေးထွေ
ယ်ရွယ်လေးတွေလောက်ရှိ၏။း၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ စိမ်းမြမြ အမွှေးလေးတွေနှင့် တောင်ပူစာခုံးခုံးလေး….နှုတ်ခမ်း နှစ်ခုက စေ့ကပ်၍ တင်းနေသည်။
အာနိုး ထွေးထွေးကို ဘေးမှထိုင်၍ ဖက်လိုက်သည်။ ဗလကောင်းသော အာနိုး၏ ရင်ခွင်ထဲတွင် ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ပျောက်လုမတတ်ဖြစ်နေ၏။ အသားချင်းထိလိုက်ရတော့ အာနိုး၏ သွေး တွေက ဆူသထက်ဆူပွက်လာသည်။ အာနိုး၏ ရင်ခွ့ ထွေးထွေးမှာ ချမ်းတာတော့
င်ထဲရောက်သားတောနည်းနည်းသက်သာသွားသည်။ ဒါပေမယ့် အာနိုး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ အချောင်းကြီးက သူမ၏ ပေါင်ရင်း တွင် တင်ကာ ဆီးခုံကို ကန့်လန့်ဖြတ်ထိ၍နေသည်။ ယားတတ်သော ထွေးထွေိဖြစ်နေ၏။ ခ
း ယားကျိကျဏအကြာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ထွေးထွေးတစ်ယောက် ဒီအချောင်းကြီးကို ပို၍ထိချင်သည့်သဘောဖြင့် သူမ၏ ခါးလေးကို ပို၍ဖိကပ်ပေးမိသည်။ အတွေ့အာရုံက နှစ်ယောက်စလုံးကို တနေရာတည်းတွင် ထိန်း ချုပ်ထားလိုက်ပြီ။
“ အင်း….နည်းနည်းတော့ ချမ်းသေးတယ်….”
အာနိုး ထွေးထွေးကို ပြင်ဖက်ရန်အတွက် ကိုယ်ချင်းခွာလိုက်ရာမှ ငုံ့ကြည့်မိလိုက်တော့ ထွေးထွေ
း၏ ကိုယ်လုံးအရွေဖြစ်သားသော နို့လေးနှစ်လုံးက အာနိုး၏ မျက်လုံးထဲမှနေ၍ ခန္ဓာကိုယ်တ
့ လှုပ်ကနွဲင်း ထွိဝင်၍သွားသည်။ အာနိုး သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ထွေးထွေး၏ နို့လေးတစ်လုံး ကို ငုံ့၍စို့ပစ်လိုက် သည်။
ပြောသာပြောသည်…ထွေးထွေးက မရုန်းဖယ်…သူမပြောလိုက်ကာမှ အာနိုးက ပို၍ဖိစုပ်လိုက် သည်။
ထွေးထွေးရင်ဘတ်လေးကော့တက်သွားသည်။ စောစောက ချမ်းတာတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘဲ တကိုယ်လုံးဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်းဖြစ်ကာ တဖြေးဖြေးနှုံးကျလာသည်။ အာနိုးကလည်း ခေသူမဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့မရှိပေမဲ့ ရွာလယ်က တိုးလှိုင်တို့ဗွီဒီယိုရုံတွင် သန်းခေါင်လောက်မှပြသည့် နိုင်ငံခြားအပြာကား တွေကို ခဏခဏကြည့်ဖူးထားသူဖြစ်သည်။
အာနိုးက သူမ၏နို့လေးနောက်တစ်လုံးကို ပြောင်း၍အစုပ် ထွေးထွေးက အာနိုး၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်ဖက်ထားလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဆီးခုံကိုလာ၍ ထောက်နေသော အာနိုး၏ ဟာကြီးကလည်း တဆတ်ဆတ်ခုံးထနေသည်ကို ထွေးထွေးသတိထားမိသည်။ အပျိုမလေး ထွေးထွေးကလည်း လက်တွေ့ မရှိပေမယ့် အဖေနဲ့အမေတို့ အဝှါပြုကြတာကို မကြည့်ချင်မြင်လျက်သား မကြာခဏတွေ့မြင်ခ့ဖူးသူဖြစ်ဲ
အာနိုး ထွေးထွေးကို ပက်လက်လှန်လှဲလိုက်သည်။ ပြီးတွော
့ သူ့ပုဆိုးကို ချတ်အချ ထွေးထွေးက
ပေါင်နှစ်လုံးကို ထောင်လိုက်သည်။ အာနိုး ဒူးထောက်၍ ဝင်ကာ လီးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြား တေ့၍ဖိချ သည်။
း၏ပေါင်နှစ်လုံးက ပို၍ကားသားသည်။ တစ်ကြိမ်လည်းမဝင် နှစ်ကြိမ် လည်းမဝင် အာနိုး၏စိတ်တွေက ထရုံမဟုတ် ကြမ်းလာသည်။ ထွေးထွေး၏ စေ့ကပ်နေသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဖြဲကာ ဟသွားတော့ လီးကိုတေ့ပြီး အတင်းဖိချလိုက်သည်။
နာလွန်း၍ ထွေးထွေးငိုချလိုက်သည်။ သူမ၏ အသားလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး မသိသည့်အချက်ကတော့ ထွေးထွေး၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းအောက်စပ်လေး တစ် လက်မလောက် ကွဲပြီး သွေးတွေထွက်လာသည်။ ဒါတင်မဟုတ် ထွေးထွေ
သွားး၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ လည်း သွေးလေးတွေစီး၍ ထွက်လာသည်။ တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ငိုနေသော ထွေးထွေးကြောင့် အာနိုးတစ်ယောက် ဘာလုပ်ရ မှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားသည်။ ထွေးထွေကြီးကို ဖိကပ်
း၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဝင်နေသော လီးထားလိုက်ပြီး ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လေးကို ငုံ့၍ ဖက်ထားလိုက်သည်။ ခဏတာငြိမ်ပြီးနေလိုက်တော့ နာကျင်တာတွေပြီး ပူနွေးတောင့်တင်းသန်မာလှသော လီးကြီး၏အတွေ့က ပို၍လာသည်။
အာနိုးမှာလည်း တဆုံးမြှုပ်နှံထားသော လီးကြီးကို ပတ်လည်ကြပ်ညပ်၍နေသော စောက်ပတ် သားနုနုလေးများက ဝိုင်းဝန်းဆုတ်နယ်ပေးသလို ဖြစ်လာသောကြောင့် မရိုးမရွဖြင့် မနေနိုင်ဖြစ်လာပြီး လီး ကြီးကို ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီးဆောင့်သည်။
ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လုံးလေး တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေသည် ကျွ
မ်းကျင်မှုမရှိသေး၍ အာနိုးက လီးကို တဆုံးထုတ်၍ မဆောင့်ဘဲ လက်နှစ်လုံးလောက် တဝက်လောက် ထုတ် ထုတ်ပြီးဆောင့်သည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လီးကရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် ရွေ့လျားနေလေတော့ လီးချောင်းကြီးတစ်ခုလုံးက စောက်ပတ်အ တွင်းသားလေးတွေကို တောက်လျှောက်ပွတ်တိုက်၍နေသဖြင့် နှစ်ယောက်စလုံးအရသာထူးနေကြသည်။
ကိုယ်လုံးလေးတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော့ ခန္ဓာကိုယ် အ ပေါ်ယံမှ နို့အုံလေးနှစ်လုံးက ယမ်းခါ၍နေသည်။ လုပ်ရမှန်းသိ၍တော့မဟုတ် အာနိုးကထွေးထွေး၏ နို့အုံ နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲ
သည်။ နို့သီးရဲရဲလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ညှပ်ကြည့် သည်။ အဆောင့်ကလည်း မပျက်ပေ။ ဘယ်အရာနှင့်မျှမတူအောင် အရသာထူးနေသူက ထွေးထွေပြင်းကြားက
း။ တဟင်းဟင်း အသက်ရှုသံပြင်း တွေ့ချင်ဇောဖြင့် အာနိုးကို မျက်လုံးလေး ဖွင့် ဖွင့်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးလေးလည်ကာ ပြန်မှိတ် မှိတ်သွားသည်။ ခံစားရခက်လာတော့ ထွေးထွေးတစ်ယောက် ခါးလေးကော့ကော့တက်လာသည်။ လီးကို တဝက်လောက် တဝက်လောက် ထုတ် ထုတ်ပြီး ဆောင့်နေရတာ အာနိုး စိတ်ထဲသိပ်ပြီး အားမရချင်တော့ ပေ။
အာနိုးတကိုယ်လုံးလည်း ဆိမ့်၍ အရသာရှိလှသည်။ အာနိုး သူ့လီးချောင်းကြီးကို အဆုံးနီးပါး ထုတ်၍ ဆောင့်သည်။ ထိုသို့ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ထွေးထွေးမှာ ခါးလေးကော့တက်နေသည်။
အာနိုးဒီလောက်ပဲ ပြောလိုက်နိုင်သည်။ ထွေးထွေး တကိုယ်လုံး လူးပျံလာခိုက် အာနိုးက အသ ကုန် ငါးချက်လောက်ဆောင့်ပြီး လီးထိပ်မှ အရည်တွေကို တပြွတ်ပြွတ် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ ထွေးထွေးက သူ့ကိုလှမ်း၍အဖက် အာနိုး တကိုယ်လုံးက ထွေးထွေ
း၏ ကိုယ်ပေါ်သို့မှောက်ကျသွားလေ တော့သည်။
“ ကဲ…ဖယ်ပါအုံး….ဒီမှာ အသက်ရှုလို့တောင် မရဘူး….”
ဒီတော့မှ အာနိုးက ထွေးထွေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ထပြီး လီးကိုပါ စောက်ခေါင်းထဲါထဲ ချတ် လိုက်သည်။
“ သွား…အပြင်ထွက်နေ….ငါ အဝတ်တွေဝတ်အးမယ်….”ုံ
အာနိုးသူ့ပုဆိုးကို ကောက်ယူ၍ ညောင်ပင်အခေါင်းပေါက်ကြီးထဲမှ ထွက်လိုက်ရသည်။ စောစော ကတော့ ခံချင်တိုင်း အလိုးခံနေပြီး ခုမှမိန်းကလေးတွေများ ရှက်တော်မူနေကြသည်။ ဒါကို အာနိုးမသိ။ ဘယ်လိုလဲဟ ဟူသော အတွေးဖြင့်သာ စဉ်းစားရခက်နေသည်။ ခဏနေတော့ ထွေးထွေက အဝတ်အ စားစုံလင်စွာဖြင့် ညောင်ပင်အခေါင်းပေါက်ကြီးထဲပြင်သို့ထွက်လာသည်။
မှ ကိုယ်လုံးလေးလှည့်ကာ အ“ အာနိုး….နင် ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ….” “ ငါ…မှို ခူးမလို့….” အာနိုး ထွေးထွေးမျက်နှာကို ရဲရွဲ
မကြည့်ရဲ…ထေးထွေးမှာလည်း ထိုနည်းတူ မျက်နှာလေးအောက် ငုံ့၍ ပြောနေသည်။
“ နင်….မှို မခူးရသေးဖူးပေါ့….”
ထွေးထွေးက ညောင်ပင်ခြေရင်းတွင်ချထားသော ပုခုံးတွင်လွယ်ရန်ကြိုးတပ်ထားသော တောင်း လေးအပြည့်မှိုတွေကို နှိုက်ပြီး အာနိုးကို လှမ်း၍ပေးသည်။ အာနိုးက သူ့ပုဆိုးခါးပုံစထဲ ထည့်သည်။
“ ကဲ…အာနိုး….နင် ပြန်တော့….”
“ ငါ နင့် ကို လိုက်ပို့အုံးမလားလို့….”
အာနိုး လေးလေးပင်ပင်နှင့်ထ၍ ရွာကိုဦးတည်၍ လျှောက်သည်။ အာနိုးအတော်ဝေးဝေးရောက် သွားတော့မှ ထွေးထွေးက ညောင်မြစ်ဆုံကို လက်ထောက်၍ အားယူပြီးထသည်။ ပြီးတော့ မှိုတွေထည့် ထားသော တောင်းလေးကို လွယ်လိုက်ပြီး လျှေက်လှမ်းလိုက်သည်။ ထွေးထွေ
းတစ်ယောက် လမ်း လျှောက်တာ ကွတတနှင့် ထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။ သူမကိုယ် သူမဒီလိုဖြစ်မည်ကို ခန့်မှန်းမိသော ထွေးထွေးက သူမဒီလိုပုံလျှောက်လှမ်းတာကို အာ နိုး
မြင်တွေ့သွားမှာစိုး၍ အာနိုးကို အရင်ပြန်ခိုင်းခ့တာပင်ဖြစ်တော့သည်။ဲ
ကိုသန်းငွေ လွတ်ချင်တိုင်းလွတ်၍နေသည်။ ပိုက်တဲမှာစား ပိုက်တဲမှာအိပ်သည်။ မခင်အေး စိတ် ညစ်ရသည်။ သူက ယောက်ျား အကြောင်းမဟုတ်။ ပိုက်တဲ မှာက မိန်းမတွေပေါသည်။ မခင်အေးတို့ မိန်းမသားမှာသာ စိတ်ညစ်နေရသည်။ သန်းငြွေပန်မအိပ်တာ ရက် (၂၀)ကျော်ပြီ။ နေ့ခင်းဖက် ပြန်လာ တတ်သော်လည်း ခဏသာ။ အာနိုးကို ခိုင်းစရာ ရှိတာခိုင်း။ သူမကိုလည်း ပြောစရာရှိတာပြောပြီး ပြန် သွားတတ်သည်။ မခင်အေး စိတ်တွေ လေနေပြီ။ သူမ၏ လိုအပ်သော ဒုက္ခအတွက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရ မည်မှန်းမသိ။ ရေချိုးပြီးစ သနပ်ခါးလိမ်းနေသော မခင်အေးတစ်ယောက် တွေးမိပြီး စိတ်သောကရောက် နေခိုက် သူမ၏ ရှေ့မှ မှန်ထဲတွင် အရိပ်တစ်ခု တွေ့လိုက်သည်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ထိုင်၍ နွားနဖားကြိုးအတက်ွကြိုးထိုးနေသော အာနိုးက သူမ၏ နောက်ကျော ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေခြင်းပင်။ အာနိုးတစ်ယောက် ထဘီရင်လျားဖြင့် သနပ်ခါးထိုင်လိမ်းနေ သော မခင်အေးကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရင်း သူနှင့်ကိုယ်ချင်းရင်းနှီးခဲ့ဖူးသော ထွေးထွေးနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နေမိသည်။
ထွေးထွေးက သူနှင့် သက်တူရွယ်တူ အသက် (၁၅) (၁၆) လောက်သာရှိသည်။ တောသူတောင် သား အလုပ်ကြမ်းပါမရှောင်လုပ်နေကြရသူမို့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ တောင့်တင်းသန်မာထွားကြိုင်းလှသည်။ ဒါပေမယ့် ထွေးထွေး၏ အလှက အပျိုပေါက် မပြည့်စုံသေးသောအလှ။ မခင်အေး ဆိုတာက အသက်က အစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ အလှက ပြည့်စုံနေပြီ။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်သည်။ အိမ်ထောင်သည်ဘဝဆို တာ က ယောက်ျားနှင့် သဟဇာတဖြစ်ကာ တည့်လျှင်တည့်သလို စိုပြေလန်းဆန်း၍ အလှတွေတိုးတတ် တာမျိုး။ ဒီတွော
့ မခင်အေး၏ အလှက ထွေးထေး၏ အလှထက် ပိုသည်။ အာနိုး၏ အတွေးထဲ့ ဒါမျိုးတွေမရှိ။ အာနိုး စဉ်းစားမိသည်က ထွေးထွေ
တွင်တေားထက် မခင်အေး က ပို၍ကြည့်ကောင်းသည်။ ပြီးတော့ ထွေးထွေးကို ကြည့်ရ မြင်ရ တွေ့ရသည်ထက် မခင်အေးကို မြင်ရ တွေ့ရ ကြည့်ရသည်က သူ့စိတ်တွေပို၍ထလာသည်ဟု တွေးမိသည်။ ဒါပေမယ့် မစရဲ သူက သူရင်းငှား မခင်အေးက သူရင်းတိုင် ပြီးတော့ သူ့အပေါ်မိဘကဲ့သုိ့ ကောင်းသည်။ ဒီတော့ အာနိုးဘာမှမတတ်နိုင်။ ကြည့်၍သာနေရသည်။ ကြည့်တာတောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရသည်။ ဗြောင်မကြည့်ရဲပေ။
့မတူဘဲ ငါ့ကို ဘာလို့တမျဲ
ဒီကောင်လေး အရင်ကနဲိုးပြောင်းလာရတာလ။ ဟုတ်ပြီ။ အာနိုးဆိုတာ က ငါ သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ရမဲ့သူပဲ။ ငါ့ သဘောပဲ။ အာနိုး သူမကိုကြည့်တာတွေ့ရပြီး မခင်အေး၏ စိတ် တွေက ပြောင်းလာရသည်။ ခြေထောက်ကိုဆင်း အာနိုးဘက်ကို ဘေးခေါင်းပြူ၍ အာနိုးရှိနေ ကြည့်နေ တာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ ထမီကို ပေါင်ရင်းထိဆွဲ
တင်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သနပ်ခါး စိမ် ပြေနပြေလိမ်းပစ်လိုက်သည်။ မခင်အေး၏ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းသော ပေါင်တံကြီးတွေက အာနိုးကို တ ဖက်ပြန်မလှည့်ဘဲ ငေးကြည့်မိသည်ထိ ဖြစ်သွားသည်။
ဒါတင်မကသေး မခင်အေးက ရင်လျားထားသော ထဘီကို ဖြတ်ကနဲ ဖြည်ချကာ ရင်ဘတ်ကို သနပ်ခါး ကဗျာကယာပွ
တ်တိုက်ပေးသည်။ ကလေးမမေးသေးသော အိမ်ထောင်သည်၏ နို့ကြီးတွေက ဖွေးနု၍ ဖွံ့ထွားတင်းမာလှသည်။ လှစ်ကနဲ ခဏတာဖြစ်သော်လည်း အာနိုးတစ်ယောက် ဖင်ကြွပြီး ထရပ် တော့မလိုပင်ဖြစ်သွ့ ကြာရင်ခက်မည်။
ားရသည်။ ဆက်ပြီးတော့လည်း အာနိုးထိုင်ပြီး မနေချင်တော
့သည်။ အိမ်ဘေးရောက်တောပုဆိုးကိုဖြည်ပြီး လီးကိုကြည့်သည်။
လီးထိပ်တွင် အရေလေးတွေက စို့နေရုံမျှမက ညောင်စေးတန်းကာပင် ကျနေကြသေး၏။
ဗြုံးကနဲ အာနိုးစိတ်ထတွင် ထွေးထွေးကို သတိရလိုက်သည်။ ဒဲါပေမယ့် သူချက်ချင်း ခေါင်းခါ လိုက်သည်။ မနေ့က ထွေးထွေးတို့တဲဆီ သူရောက်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှမရှိဘဲ ထွေးထွေးတစ်ယောက်ထဲ သာရှိပေမယ့် ထွေးထွေးက “ နင်….ငါ့ ဆီမလာနဲ့အုံးဟာ….မတွေ့ချင်သေးဘူး ” ဟု သူ့ကို ပြောလိုက် သည် မဟုတ်ပါလား။ အာနိုး စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် အိမ်ဘေးရှိပျဉ်ချပ်ကွဲနေသဖြင့် မှောက်ထားသော နွားစာခွက်ကြီး ပေါ်တင်ွထိုင်၍ငိုင်နေလိုက်သည်။
“ အာနိုး ရေ….ထမင်းစားမယ်ဟေ့…”
ဘယ်မျှကြာသွားသည် မသိ။ အိမ်ပေါ်မှ မခင်အေး၏ ခေါ်သံကြားရမှ အာနိုးဖြတ်ကနဲ သတိထား မိလိုက်သည်။ မှောင်ရီပျိုးနေပြီ။
ထမင်းစားရန် အိမ်ပေါ်သို့တက်လာသော အာနိုး အိမ်ပေါ်သို့ရောက်တော့ ထူးဆန်းသောမြင်ကွင်း ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ပြင်ထားသော ထမင်းပွဲ ပြီးတော့ ထမင်းပန်းကန်က နှစ်ချပ်။ ခါတိုင်းဆို သူတို့ စား ပြီးမှ အာနိုးက ကိုယ့် ပန်းကန်ကိုယ်ခူးပြီး စားရသည်။ အခုတော့….
“ လက်ဆေးလေ….အာနိုး…..အမနဲ့ အတူတူစားရအောင် ”
မီးဖိုထဲက ဟင်းပန်းကန်ကို ကိုင်၍ထွက်လာသော မခင်အေးကပြောသည်။ အာနိုး မီးဖိုထဲဝင်၍ လက်ဆေးသည်။ လက်ဆေးပြီး ထမင်းပဲကိုပြန်ရောက်တွော့ ထူးဆန်းတာကို ထပ်တွေ့ရပြန်သည်။ တ ဝက်လောက်ရှိသော အရက်ပုလင်းနှင့် ကိုင်းဖန်ခွက်တစ်လုံး ပြီးတော့ မတ်ခွက်တစ်ခွက်နှင့် ရေကအ ပြည့်။
“ နင် ပင်လည်း ပင်ပန်းတယ်…ပြီးတော့ မိုးလည်းအေးတယ်….သောက်ချင်ရင် သောက်လိုက်… အမ… သရက်သီးမှည့်တွေ လှီးလိုက်အုံပြီးမှ အတူတူ ထမင်းစားကြတာပေါ့….”
မခင်အေး မီးဖိုထဲသို့ ပြန်ဝင်သွားသည်။ အာနိုး အကြိုက်တွေ့ပြီ….ချထားသော ကြက်သားဟင်း နှင့် မြည်းကာ အရက်တစ်ပိုင်းကို ခဏအတွင်း ကုန်အောင် သောက်ပစ်လိုက်သည်။ သူအရက်သောက်၍ ပြီးလောက်မှ မခင်အေးက မီးဖိုထဲမှ လှီးထားသော သရက်သီးမှည့်ပန်းကန်ကို ကိုင်ပြီးထွက်လာကာ ထမင်းစားပျွဲက်နှာချင်းဆိုင်ကာ စားသည်။
ပေါ်တွင်ချရင်း အာနိုးနှင့် မ
အိမ်ထဲတွင် ထွန်းထားသော ဘက်ထရီမီးရောင်က ပြပြလေး။ မခင်အေး၏ ကိုယ်မှ မွှေးပျံ့သောရ နံ့တို့က အာနိုး၏ အရက်ရှိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးနေသယောင်။ အင်္ကျီမပါသော အာနိုး၏ ကိုယ်လုံးကြီးက လည်း မခင်အေး၏ သွေးတို့လှည့်ပတ်မှုကို မြန်ဆန်နေစေသည်။ မခင်အေး က ဟင်းတွေတပြုံကြီးကို အာနိုးပန်းကန်ထဲ ခပ်ထည့်ပေးပြီး ထမင်းစစားသည်။
မျက်လွှာချထားရာမှ တချက်တချက် အာနိုးကို ကြည့်ရင်းစားသည်။ မခင်အေးက သူ့ကိုကြည့်၍ စားနေချိန်တွင် အာနိုးက မျက်လွှာချထားသည်။ မခင်အေး မျက်လွှာချထားချိန်တွင် အာနိုးက သူမကို ကြည့်ရင်း ထမင်းစားသည်။ ထမင်းစားပြီးသွားတော့ အာနိုးက စားပြီးပန်းကန်တွေကို ဆေးရန်ထပ်သည်။
“ နေ….နေ….အမ ဆေးလိုက်မယ်….မင်း လက်ဆေးတော့….ဟိုမှာ အမ ထန်းလျက်နဲ့ ရေနွေး ကြမ်းလုပ်ထားတယ်။ သွားသောက်ချေ။ ပြီးတော့ အင်္ကျီလည်း ဝတ်ထားအုံ
း မိုးအေးတယ်….” မခင်အေး အသံက ရှတတလေး။
အာနိုးက အင်္ကျီဝတ်ပြီး ထန်းလျက်နှင့် ရေနေွးကြမ်းကို အချိုတဲသည်။ ခဏနေတော့ မခင်အေး ကပါ ရောက်လာပြီး အာနိုးဘေးတွင် ထိမတတ်ထိုင်ကာ ထန်းလျက်ဖြင့် အချိုတဲသည်။
“ အာနိုး….နင် နောက်ဖေးက ထင်းတဲမှာ မအိပ်နဲ့
့တော့….အိမ်ပေါ်မှာလာအိပ်….မိုးကောင်းတောငါ တစ်ယောက်ထဲ မနေရဲပြန်လာအိပ်မှ နင်
ဘူး…နင့် ဦးလေးကလည်း ရှိတာမဟုတ်ဘူး….နင့် ဦးလေး ထင်းတဲပြန်အိပ်ပေါ့…..သူ မရှိရင် အိမ်ပေါ်မှာပဲ လာအိပ်….”
နှစ်ယောက်သား စကားမဆိုမိကြ။ တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ယောက်ခိုးကြည့်ရင်း အသက်ရှု သံတွေက ပြင်းလာရသည်။ အတော်လေးကြာတော့မှ မခင်အေး၏ စကားသံက ထွက်လာသည်။
“ အာနိုး….တံခါးတွေပိတ်တော့ မိုးရွာလာပြီ….”
အာနိုး ထိုင်ရာမှထပြီး အိမ်တံခါးတွေကို လိုက်ပိတ်သည်။ မခင်အေးက အာနိုးကို မျက်စေ့ဒေါက် ထောက်ကြည့်နေသည်။ ကြည့်နေသော သူမ၏ မျက်လုံးများက အရောင်တလက်လက်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ တံ ခါးတွေပိတ်ပြီးသွားတော့ အာနိုးက မခင်အေး၏အနားတွင် လာထိုင်သည်။
“ နင့် အိပ်ယာခင်းပေးဖို့ အခန်းထဲုံးနဲခြင်ထောင်သွားယူလိုက်အုံးမယ်…..နင် ဖျာခင်း
မှာ ခေါင်းအ့ ထား….ငါ ဘက်ထရီမီးယူသွားမယ်….” အာနိုးက ထောင်ထားသော သင်ဖြူးဖျာလိပ်ကို ဖြည်၍ ခင်းသည်။ မခင်အေးက ဘက်ထရီမီး ချောင်းနှင့် ဘက်ထရီအိုးကိုယူပြီး အတွင်းဖက်ရှိ သူမတို့၏ အိပ်ခန်းထဲ
ဝင်သွားသည်။ မကြာမှီတွင် အိပ် ခန်းထဲမှ မခင်အေး၏ အသံက ထွက်လာသည်။
“ အာနိုးရေ….ဒီမှာ လာယူဟေ့…”
အာနိုး မခင်အေးတို့လင်မယား အိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ အခန်းထဲတွင် ဘက်ထရီမီးက လင်း နေသည်။ သူရောက်သွ့ မခင်အေးက ပုဆစ်တုတ်ထိုင်ရင်း သူတို့၏ နှစ်ယောက်အိပ်မွှေ့ယာကြီး
ားတောအောက်မှ ဖျာကိုလှန်၍ ကြမ်းပြင်ကို ငုံ့၍ကြည့်နေသည်။ အာနိုးဖက်ကို နောက်ကျောပေးထားသော မခင် အေး ဖင်ဆုံကြီးက အယ်၍ လုံးတစ်နေသည်။ ဒါကို နောက်မှကြည့်ရင်း စောစောထဲက မခင်အေးနှင့် နေ ရင်း တထောင်ထောင်ဖြစ်နေသည့် အာနိုး၏ လီးက ပိုပြီး မာကြောတင်းထောင်လာသည်။
“ အာနိုး ခဏ….ဒီမှာ ပုရွက်ဆိတ်တွေ
လား မသိဘူး…” အာနိုး မခင်အေး၏ အနားကို တိုးကပ်သွားပြီး ကားအယ်နေသော ဖင်ကြီးကို အနီးကပ်ကြည့်ရင်း ရင်တွေ တဒိန်းဒိ
ဒီမှာဟ ဆိုပြီး အာနိုးကိုမကြည့်ဘဲ နောက်ပြန်လက်ဖြင့် ပုတ်လိုက်သော မခင်အေး၏ လက်က တောင်မတ်နေသော အာနိုး၏လီးကြီးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်မိသည်။
“ အမလေး…” ဆိုပြီး ဗြုံးကနဲ လန့်လည်းလန့် နာလည်းနာသွားသော အာနိုးက လီးကိုပုဆိုးပေါ်မှ
အုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း ကိုယ်က နောက်သို့ ယို့သွားသည်။
မခင်အေး ချက်ချင်းလှည့်ကြည့်ပြီး အာနိုး၏ လက်တဖက်ကို ဆွဲပြီးပြောသည်။
“ တခုခုဖြစ်သွားရင်ခက်မယ်….အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်….အမ ကြည့်ပေးမယ်….”
မခင်အေးက အာနိုး၏ လီးနေရာကို ကြည့်၍ပြောသည်။ မခင်အေး၏ နှာသီးဖျားတစ်ခုလုံး နီမြန်း နေသည်ကို ဘက်ထရီမီးရောင်အောက်တွင် ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရသည်။ အာနိုးက သူမကို ကြောင်၍ ကြည့်နေသည်။
“ ကဲ….လှဲမှာ လှဲ
မခင်အေးက လက်ကိုဆွဲ့ ကြီးပေါ်သို့
၍ အတင်းလှဲခိုင်းတောအာနိုးက နှစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာပက်လက်လှဲချလိုက်သည်။ အာနိုး၏ ဘေးသို့ မခင်အေး ဒူးထောက်၍ထိုင်ချလိုက်ပြီး အာနိုး၏ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးကျွဲ
တ်ထွက်သွားအောင် ခြေဖျားမှနေ၍ ဆွချတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထောင်းကနဲ ထွက်လာသော အာ နိုး၏ လီးက အသက်သာငယ်သော်လည်း သိပ်ပြီးတေွာ့ မဟုတ်လှပေ။
၏ လီးလောက် မကြီးပေမယ့်လည်း စံချိန်တော့မှီသည်ဟု မခင်အေး လီးရင်း တွေးမိလိုက်သည်။ အာနိုး မျက်နှာကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမလီးကြီးကို စိတ်ဝင်တစား ငေးစိုက် ကြည့်နေသည်အား သူက ကြည့်နေသည်။ မခင်အေး ရှက်သလိုဖြစ်သွားသည်။
“ အာနိုး….နင့် မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထား….”
ပြောသည့်အတိုင်း အာနိုးက မျက်လုံးကို ချက်ချင်းမှိတ်လိုက်သည်။ မခင်အေး ပြုံးလိုက်ပြီး တောင်မတ်နေသော လီးကြီးဆီသို့ သူမ၏ လက်တဖက်ဖြင့် ကတုံကယင် လှမ်းဆုတ်လိုက်သည်။ အာနိုး ဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ မခင်အေး တံတွေးတချက်ကြိတ်၍ မျိုချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လီးကြီးကို ခပ်ဖွ ဖွလေး ပွတ်ပေးရင်း မရိုးမရွဖြစ်လာကာ ကန်လက်တဖက်ဖြင့် အောက်မှ ဂွေးဥမဲကြီးကို ဖွဖွလေး
ျမဲလုံးလုံးဆုတ်ပေးသည်။ ဒီလိုအယုအယ အကိုင်အတွယ်မျိုး အာနိုး တစ်ခါမှ မခံစားဖူးခဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မှိတ်ရင်း အ သာမှိန်းနေသည်။ ထောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးက ထိပ်ဝတွင် နှီးတပြားလောက် အရေခွ
ံလန်နေ သည်။ မခင်အေး လီးပေါ်မှ အရေခွံကို အောက်သုိ့ခပ်ဖြေးဖြေးဆွချရင်း ထွက်လာသော လီးထိပ်နီနီကြီး ကိဲုကြည့်ကာ မရိုးမရြွဖစ်လာကာ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်လိုက်မိသည်။ မခင်အေး လီးဒစ်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက် ရင်းက လက်မဖြင့် လီးခေါင်းကြီးကို ဖွဖွလေးဖိ၍ ပွတ်လိုက်သည်။
ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဟလိုက်ရာမှ အာနိုးကော့တက်သွားသည်။ လက်တဖက်က လီးကိုပွတ်ပေးရင်း မခင်အေး၏ ကျန်လက်တဖက်က ကြွက်သားအမြှောင်းလိုက်ထနေသော အာနိုး၏ ပေါင်တံကြီးကို မချင့်မ ရဲဖြင့် လိုက်ဆုတ်နေသည်။ အုံမထူသေးသော်လည်း သန်စွမ်းလှသည့် လမွှေးများကို လက်ချောင်းလေး တွေဖြင့် ထိုးဖွလိုက်သေးသည်။ လီးကြီးက မခင်အေး၏ လက်ထဲတွင် စောစောကထက် သိသိသာသာ ကြီး မာကြော၍လာရုံမျှမက လီးထိပ်တွင် အရည်ကြည်လေးတွေ စို့လာသည်။ အရိုင်းလေးကို စိတ်ပါလာ အောင် မနည်းလုပ်ရမည်ဟု ထင်ထားသော မခင်အေး ပျော်သွားသည်။
အရသာရှိနေခိုက် မခင်အေး က အလန့်တကြား ကိုယ်လုံးကိုခါလိုက်သဖြင့် လန့်သွားသော အာနိုး ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်။
ပြောရင်း မခင်အေးက သူမ၏ အင်္ကျွ
ီတွေကို ချတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ ပွတ်ပေးစမ်းပါဟ…..ပုရွက်ဆိတ်တွေ တက်နေတယ်…” မခင်အေး၏ကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးကိုလက်တဖက်ဖြင့်လှမ်းဖက်လိုက်ပြီးအာနိုးက အင်္ကျီကျွ
တ်သွား သော မခင်အေး၏ အပေါ်ပိုင်းကို လက်ဖဝါးဖြင့်ပွတ်ပေး၏။ ပွတ်ရင်း နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်မိလိုက်ရင်း ဘာကို မှမစဉ်းစားတော့ဘဲ နို့ကိုငုံ့၍ စုပ်တော့သည်။ မခင်အေး ရင်ဘတ်ကို ကော့ပေးရင်း နို့စို့နေသော အာနိုး၏ လည်ပင်းကို လက်တဖက်ဖြင့်ဖက်ရင်း အာနိုး၏ ခေါင်းကို သူမ၏ ရင်ဘတ်သို့ဖိကပ်ပေးထားသည်။ အာနိုး နို့တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးစို့သည်။ ပြီးတော့ လက်ကထိုင်ထားသော မခင်အေး၏ ဖင်ဆုံကြီးတွေကို လှမ်း၍ ကိုင်ကာ ညှစ်လိုက်သေးသည်။ မခင်အေးတစ်ယောက် အပျိုမလေးသဖွယ် အသားလေးတွေ တဆတ် ဆတ်တုန်လာသည်။
“ နေ…နေအုံး…အာနိုး….ပုရွက်ဆိတ်က အောက်ကို ဝင်ပြန်ပြီ….” အာနိုးခေါင်းက သူမ၏ ရင်ဘတ်မှ ခွာသွားတော့ မခင်အေး ခွဲါ
းမှ ထဘီကိုဆွချတ်လိုက်ပြီး ပက်လက် လှန်လှဲလိုက်သည်။ ပေါင်တစ်ချောင်းကိုလည်း ထောင်၍ ကားလိုက်သည်။
စိတ်ထနေသော အာနိုး မခင်အေး၏ အမွှေးမဲတွေဖုံးနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို အတင်းဖိ၍ပွတ် သည်။ သူရင်းတိုင်နှင့် သူရင်းငှားကြားတွင် ကာထားသော သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှ တံတိုင်းက ကြိုး ပေါက်သွားချေပြီ။
အာနိုးက ပြူးထွက်နေသော စောက်စေ့ကို ဖိ၍ ဖိ၍ ပွတ်ပစ်လိုက်သည်။ မခင်အေး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ခါသွားရင်း စောက်ရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်လာသည်။
“ အထဲ….အထဲကိုဝင်သာွးပြီ….လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးထည့်ပြီး စမ်း…စမ်း…”
“ ဟုတ်ပြီ…..ဟုတ်ပြီ….ဘေးတွေကို လက်ထိပ်နဲ့ ကော် ကော်ပြီးစမ်း…..”
အာနိုးက စောက်ခေါင်းထဲ လက်ခလယ်ထိုးထည့်ကာ မွှေပွတ်ပွတ်ရင်း လက်ထိပ်ဖြင့် စောက် ခေါင်းအတွပြီး
င်းသားတွေကို ပွတ်၍ ပွတ်၍ စမ်းသည်။ မခင်အေး ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ တက်တက်သွားစောက်ရည်တွေက ထပ်ပြီးစိမ့်ထွက်လာသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း မြင်မကောင်းအောင် ဖေါင်း၍ ခုံး
အာနိုးက လက်ကို စောက်ခေါင်းထဲမှ ထုတ်ကာ နောက်သို့ ကိုယ်ကို ယို့လိုက်သည်။ မခင်အေးက လှဲနေရာမှ ဆတ်ကနဲထိုင်၍ ဘာမပြော ညာမပြောဖြင့် အာနိုးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်၍ နမ်းသည်။ ဒီ တော့ အာနိုးက မခင်အေးကို တအားဖက်ကာ ပြန်နမ်းသည်။ အာနိုးစိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့။ မခင်အေး ၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ နောက်သို့ ခပ်ဖြေးဖြေးတွန်းလှဲ
သည်။ မခင်အေးက ရုန်းသည်။
“ အာ…အာနိုး….အင်္ကျီချတ်လိုက်….”ွ
အာနိုး အင်္ကျီကို အမြန်ချတ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသည်။ မခင်အေွးအာနိုးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပြီး ဖုထစ်နေသော ရင်အုံကြီးကို နှုတ်ခမ်းဖျားလေးဖြင့် စုပ်ပြီးနမ်း သည်။ ပြီးတော့ အာနိုးကို ဖက်ပြီး ပက်လက်လှန်လှဲပေးလိုက်သည်။
မိုးပေါ်ထောင်နေသော လီးကြီးက တောင့်တင်းလန်းသဖြင့် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသည်။ လီးထိပ်မွှအရည်လေးတွေက ညောင်စေးတန်း၍ကျနေပြီ။ မခင်အေး လီးကြီးကို နှုတ်ခမ်းဖျားလေးဖြင့် တစ်ချက်နမ်း လိုက်ရင်း လီးကြီးကို မချင့်မရဲဖြင့် ညှစ်ကိုင်ရင်း အာနိုးပေါ်သို့ ခွတက်သည်။
ကုန်းကုန်းကွဖြင့် စောက်ပတ်ဝတင် လီးထိပ်ကိုတေ့ရင်း စောက်စေ့ကို လီးထိပ် ဖြင့်
ကွအနေအထာွးသုံးလေးချက်ပွပြီးတော့မှ တဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်ချရင်း မခင်အေး၏ မျက်လုံးများ က မှိတ်လိုက်သေးသည်။ စင်းကျသွားသည်။ လီးတဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် မခင်အေးက ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး အာနိုးကို ငုံ့၍ဖက် ကာ ဖုထစ်နေသော ရင်ဘတ်ကြီးပေါ် မျက်နှာအပ်ရင်း ဖင်ကြွ၍ ဆောင့်၏။
“ ဟင်း…ဟင်း…အာနိုး ရယ်…”
မခင်အေးက တစ်ချက်ခြင်း ခပ်မှန်မှန်ဆောင့်လိုက် အားမလိုအားမရဖြစ်လာခိုက် ခပ်ပြင်းပြင်း ခပ် သွက်သွက်ဖြင့်လိုးသည်။ မခင်အေး ဆောင့်လိုးတာက ရိုးရိုးမလိုး။ လီးကို စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဖြင့် အ တင်းညှပ်ပြီး လိုးသည်။ မခင်အေးက အအိုဆိုပေမယ့် အပျိုမ ထွေးထွေး၏ စောက်ပတ်ထက်ပိုပြီး အရသာရှိကြောင်း အာနိုး တွေးမိသည်။ ခင်တွယ်စိတ်က မခင်အေးကို ပိုသွားသည်။ ပြီးတော့ စောက်ပတ် ဝဖြင့် လီးအရင်းဆီးခုံကိုဖိကပ်ကာ စကောဝိုင်းလှည့်ပေးလိုက်သေးသည်။
“ မမလည်း သိပ်ကောင်းတာပဲ….မောင်လေးရာ…..ကော့ပြီးအောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်…..ဟုတ်ပြီ …… ဟုတ်ပြီ…..အင်း…..ဟင်း……”
မခင်အေး တစ်ချက်ခြင်းမဆောင့်တော့။ ခပ်ပြင်းပြင်းဖြင့် သွက်သွက်ကြီးကို ဆောင့်နေသည်။ နှစ် ယောက်စလုံး တရှူးရှူးဖြင့် အသက်ရှုပြင်းလာရုံမျှမက အပေါ်က ဆောင့်လိုးနေသော မခင်အေး မောလာ သည်။ ဒါပေမယ့် သူမ၏ ဆောင့်လိုးချက်ကို မလျှော့ အံကိုကြိတ်၍ ဝမ်းခေါင်းသံ တအင်းအင်းဖြင့် ဆောင့် လိုးသည်။ မခင်အေး၏ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း မချင့်မရဲဖြင့် အာနိုး၏ လက်မောင်းအိုးကြီးတွေကို ဖြစ်ညှစ်
သည်။ ရင်ဘတ်ကြီးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် စုပ်စုပ်နမ်းရင်း အသကုန်ဆောင့်သည်။
“ ဗြစ်……ဗြစ်…ပြတ်….ဖွတ်…..ဒုတ်…..ပလွတ်…..ဟ…..အ….ဟင်း….”ွ
စောစောက နှူးနှပ်တာကြာထားသဖြင့် မထိန်းနိုင်တော့ပါ။ နောက်တစ်ချီမှ ခပ်ကြာကြာလေးခံ တော့မည်ဟု တွေးရင်း မခင်အေး စိတ်ကိုလျှော့ကာ အသကုန်ဆောင့်၍ လိုးလိုက်စဉ် အီးကနဲ အီးကနဲ ဖြစ်ကာ အာနိုး၏ လီးထိပ်မှ သုတ်ရည်များပန်းထွက်လာခိုက် မခင်အေး မှာလည်း စောက်ပတ်ထမှ သုတ်ဲရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထုတ်လိုက်ကာ အာနိုး၏ ဆီးခုံပေါ်သို့ သုတ်ရည်များ စီးကျလာပြီး တကျတ်ွကျွ
တ်စုပ်သပ်ရင်း ပျော့ခေကာ ကျသွားလေတော့သည်။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 09:50